Codsiga Taageerada Joogtada ah ee Waxbarashada Sare ee Afgaanistaan ​​- Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda
[ May 19, 2022 ] Kooxaha Iimaanka waxay u yeedhaan Anshaxa Cilmaaniga ah si ay ugu baaqaan Talaabada Madaniga ah ee ka dhanka ah rabshadaha nacaybka Warar & Muuqaal
Codsiga Taageerada Joogtada ah ee Waxbarashada Sare ee Afgaanistaan
January 11, 2022 Digniinta Waxqabadka, Warar & Muuqaal 0
Haweenka Jaamacadda Gawhar Shaad waxay baranayaan waxbarashada kalkaalisada iyo caafimaadka iyagoo diiradda saaraya caafimaadka hooyada. (Sawirka: Gargaarka tooska ah ee loo maro Flicker, CC BY-NC-ND 2.0.)
Waxaan ugu baaqeynaa dhammaan xubnaha Mareykanka ee Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda inay qaadaan tallaabo degdeg ah oo looga hortagayo joojinta kaalmada Mareykanka ee waxbarashada sare ee Afgaanistaan. Fadlan qoraalka hoose u soo dir wakiilkaaga Kongareeska, senatorkaaga, maamulaha USAID iyo Madaxweynaha.
Waad ku mahadsan tahay garab istaagga shacabka Afgaanistaan. (BAR, 1/8/22)
Labaatankii sano ee la soo dhaafay, dawladda Maraykanku waxay ahayd mid ka mid ah taageerayaasha ugu waxtarka badan ee waxbarashada Afgaanistaan. Guulaha ay gabdhaha iyo haweenka ka gaareen dhanka waxbarashada, gaar ahaan waxbarashada sare, aad bay muhiim u yihiin. Taageerada canshuur bixiyayaasha Mareykanka, jaamacadaha dadweynaha ayaa dib loo soo nooleeyay, fursadaha barnaamijyada qalin-jabinta ee gudaha ayaa kobcay oo soo jiitay macalimiin dumar ah oo badan, dalacsiinta macallimiinta haweenka ah ayaa si aad ah u kordhay taasoo keentay in ay qabtaan jagooyin sharaf leh sida Chancellor, ku-xigeennada, Deans, iyo kuwo kale oo badan. jagooyinka hogaaminta ee jaamacadaha, iyo barnaamijyo badan oo dheeraad ah oo shahaado ah ayaa laga aasaasay jaamacadaha oo dhan. Taageerada USG waxay keentay kumanaan deeqo waxbarasho si loo horumariyo heerarka xirfadeed ee macalimiinta iyo ardayda. Waxaas oo dhami waxay ku dhammaadeen in ka badan 700,000 arday oo iska diiwaan geliyey jaamacadaha Ogosto 2021 (33% ka mid ah waa dumar).
Inta aan kor ku soo xusnay, siyaasado iyo tilmaamo tacliimeed oo aan tiro lahayn ayaa la sameeyay si kor loogu qaado tayada, helitaanka, sinnaanta, xirfadaha kulliyadaha iyo ardayda Afgaanistaan, iyo in lala dagaallamo firfircooni iyo musuqmaasuqa jaamacadaha. Xaqiiqda ah in sanadka 2020-ka inanta dhuxusha ka shaqeysa ay heshay buundada ugu sareysa ee imtixaankii gelitaanka jaamacadda oo ay ku tartamayeen 170,000 oo arday oo dugsiyada sare ah, ayaa si weyn uga hadlaysa waxa barnaamijyada canshuur bixiyayaasha Mareykanka ay ka gaareen Afgaanistaan. Waxaa intaa dheer, ardayda barnaamijka shahaadada jaamacadeed ee lagu aasaasay maalgelinta USAID ee Jaamacadda Kabul ee Sayniska Caafimaadka waxay soo saareen hawo-mareenka iyaga oo iskood u sameeyay waqti Afgaanistaan ​​​​ay wajahday dhibaatooyin aad u daran intii lagu jiray cudurka; Tusaalahani wuxuu sii muujinayaa saamaynta togan iyo waxtarka taageerada ay bixiso USG. Tan ugu muhiimsan, laga bilaabo eber jaamacado gaar loo leeyahay sannadkii 2000, Ogosto 2021 Afgaanistaan ​​waxay lahayd in ka badan 135 machadyo waxbarasho sare oo gaar loo leeyahay, taas oo ku ballaarisay helitaanka tacliinta sare ee dalka intiisa badan.
Sida USG/USAID ay u qorsheyso taageerada waxbarasho ee Afgaanistaan, waxaa lama huraan ah in taageerada tacliinta sare ay udub dhexaad u noqoto istiraatijiyadda cusub. USG waa inay taageertaa la shaqaynta jaamacadaha gaarka loo leeyahay (haddii ay suurtogal tahay, xataa jaamacadaha dawladda) si deeqaha waxbarasho iyo dadaallada kale ee dhisidda awoodda, ardayda dumarku ay sii wadi karaan is-diiwaangelinta iyo horumarinta tacliinta. Xubnaha macalimiinta haweenka waxay u baahan yihiin taageero si ay u sii wataan shaqadooda jaamacadaha. Hadda, xubno badan oo haween ah ayaa loo baahan yahay macalimiin si ay wax u dhigaan ardayda haweenka ah.
In aan la taageerin waxbarashada sare waxa ay jebinaysaa horumarka aan hore loo arag ee horumarka tacliinta sare ee Afgaanistaan ​​– taas oo ka dhalatay taageerada deeqsinimada leh ee cashuur bixiyayaasha Maraykanka. Ardayda jaamacadaha ka soo baxday waa laf dhabarta xasiloonida dhaqaale ee dalka. Haddii waxbarashada sare aan laga taageerin Afgaanistaan, burburka maaliyadeed ee ay sabab u tahay tayada shaqaalaha ee hooseeya waxay noqon doontaa khatar waxayna sii wadi doontaa dalka inuu galo wareeg xun oo rabshado iyo quus ah. Ma jirto fursado waxbarasho sare oo haweenka gaar ahaan ay cawaaqib xun ku yeelan doonaan qaabka bulshada Afgaanistaan.
Waxaan ku boorinaynaa xubinta congress-ka inay la xiriirto asxaabta USAID oo ku dhiirigeliso inay bartaan dhammaan xaglaha iyo inay dejiyaan qorshaynta barnaamijyo waxbarasho sare oo waxtar leh oo Afgaanistaan ​​ah oo faa'iido u leh dhalinyarada, gaar ahaan gabdhaha iyo haweenka.
u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha
Interfaith Denter ee New York
Machadka Ralphe Bunch, CUNY
Machadka Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda
Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda
# waxbarasho sare
Sharafta leh Bishop Desmond Tutu
Warbixinta Sahanka Dhallin-yarada: Aqoonta Dhallinyarada & Xiisaha Waxbarashada Nabadda
Wadada loo maro Nabadeynta iyada oo loo marayo Waxbarashada Nabadda ee Afqanistaan ​​(duubista webinar)
March 31, 2021 Warar & Muuqaal 1
Jaamacadda Georgetown ee MA ee Xallinta Khilaafaadka ayaa martigelisay “Wadada Nabadda ee loo marayo Nabadda Waxbarashada ee Afgaanistaan: Casharrada la Bartay iyo Wadada u Socota Waxbarashada Nabadda.” Fiidiyowga webinar ayaa hadda la heli karaa. [sii wad akhriska…]
Codsi deg -deg ah oo loogu talagalay aqoonyahannada Afgaanistaan, ardayda, dhakhaatiirta, hoggaamiyeyaasha bulshada rayidka ah, iyo hawl -wadeennada
August 19, 2021 Digniinta Waxqabadka, Warar & Muuqaal 0
Aqoonyahannada Halista (SAR), oo kaashanaya hay'adaha tacliinta sare, ururrada, shabakadaha, iyo xirfadleyda ay khuseyso saaxiibbada Afgaanistaan, waxay ka raadinaysaa saxiixyada xubnaha bulshada tacliinta sare warqad ay u dirayaan saraakiisha dowladda Mareykanka oo ku boorrinaysa inay qaadaan tallaabo degdeg ah si ay u caawiyaan badbaadi aqoonyahannada, ardayda, iyo jilayaasha bulshada rayidka ah ee Afgaanistaan. [sii wad akhriska…]
Barida nabada aaga dagaalka: Jaamacadda Mindanao State University waxay u dabaaldegaysaa sanad-guuradii 57aad
September 11, 2018 Warar & Muuqaal 0
MSU waxaa sidoo kale loo aasaasay seddexda-qof ee Mindanao, Sulu, iyo Palawan oo ah shaybaar bulsheed oo loogu talagalay nabadda. Xerada dhexdeeda, dadka ka soo kala jeeda qowmiyado diimeed kala duwan ayaa is dhexgala. [sii wad akhriska…]